आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २१ गते बिहीबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २१ गते बिहीबार
साउन २१, २०७८ ०६:३७ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण २१ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त ५ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणकृष्णपक्षको द्वादशी तिथि वेलुका ४:०२ बजेसम्म, त्यसपछि त्रयोदशी रहनेछ ।
मेष : साथीभाइको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता मिल्नेछ । चिन्ता घट्नेछ । सुखसुविस्ताका साधनहरु जुट्नेछन् । कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा लाभ लिन सकिनेछ । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
वृष : आर्थिक लेनदेनमा विवाद बढ्न सक्छ, सजक रहनु होला । दोधारेपनले निर्णय लिन गाह्रो पर्नेछ, कुटुम्बको सल्लाहमा अघि बढ्दा सफल भइनेछ । सामान्य कार्यलाई पनि दोहोर्‍याएर गर्नु पर्दा दिक्क लाग्नेछ ।
मिथुन : अघिदेखिका समस्या हल भएर जानेछन् । विशिष्ट समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ । सहनशिलता र कृयाशिलताको बृद्धि विकास हुनेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ ।
कर्कट : सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा दिक्क लाग्नेछ । खर्चको मात्रा ज्यादा हुँदा आर्थिक तलमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ । प्रतिक्षित नतिजामा गिरावट आउनेछ । नयाँ कार्य भन्दा दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनु होला ।
सिंह : सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ । मानसिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा नवीन संभावनाहरु देखा पर्नेछन् । सृजनात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ । आकस्मिक लाभको योग बनेको छ ।
कन्या : काम प्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । नेतृत्व गणलाई विश्वास दिलाउन सक्दा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । अध्ययन–अध्यापनमा रुचि जाग्नेछ । मान्यजनसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ । वहान सुख मिल्नेछ ।
तुला : परोपकारी कार्यमा सहभागी भइनेछ । थालेका अधिकांश कार्यले उचित रुपमा स्थान पाउनेछन् । धार्मिक आस्था जाग्नेछ । टढिएका आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । नेतृत्वगणसँग भने विवाद बढ्नेछ ।
बृश्चिक : परिश्रमको उचित मूल्यांकन नमिल्दा काम गर्ने हौसला घट्नेछ । अनावश्यक कार्यमा भुल्नाले गर्नैपर्ने कार्यले विराम लिनेछन् । कठोर बोलिका कारण विवाद पर्नेछ । नविन लागनि एवं टाढाको यात्रा शुभ देखिन्न ।
धनु : पारिवारिक सहयोगले कार्य बन्नेछन् । दाम्पत्य सहयोग पाइनेछ । प्रेमीप्रेमीका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहला । श्रममार्गबाट समेत सोचे अनुरुप लाभ मिल्दा खुसी लाग्नेछ । दिन हर्षाेल्लास पूर्वक नै वित्नेछ ।
मकर : आफन्तको साथ पाइनेछ । विपक्षीले बाधा व्यवधान ल्याउन खोजेता पनि अडिक भएर लाग्दा जित तपाईँको नै हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा लगानिको वातावरण बन्नेछ । काम गर्ने जोश जाँगर थपिनेछ ।
कुम्भ : प्रतिस्पर्धात्मक काम कार्यमा विजयी भइनेछ । पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । समस्याको पहिचान गर्न सक्दा काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । तर खानपानमा विचार नपुर्‍याउँदा स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ ।
मीन : जिम्मा लिएका कार्यलाई समयमै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाई खानु पर्नेछ । शारीरिक कमजोरीले गर्दा दैनिक काम कार्यमा समेत अबरोध आउनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका अपूरा कार्य भने पहल गर्दा सफल बन्ने देखिन्छ ।